Cathay Pacific Airways Returns to Pittsburgh International Airport | Airlines
Location: Mbido » Ịdee » Airlines » Cathay Pacific Airways na -alaghachi n'ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Pittsburgh
Cathay Pacific Airways na -alaghachi n'ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Pittsburgh
N'ịgbalị iwebata ikike ibu ọzọ ebe enwere ike ma nyere aka kwado ụdọ ọkọnọ zuru ụwa ọnụ, Cathay Pacific rụzigharịrị ụgbọ elu Boeing 777-300ER iji wee nwee ike na-ebubata mbupu ụgbọ mmiri.
Ndị ụgbọ elu mba ụwa kacha ọhụrụ ga -eji nnukwu ego eburu PIT.
Ndị na-ebu ụgbọelu sitere na Hong Kong ga-eje ozi n'ọdụ ụgbọ elu Pittsburgh International ruo ngwụcha afọ.
Ụgbọ elu ga -abịa na Mọnde na Fraịde wee pụọ n'echi ya.
Ọrụ ibu na Ọdụ ụgbọ elu Pittsburgh International (PIT) ga -enweta nkwalite ọzọ na nloghachi ụgbọ elu ugboro abụọ kwa izu Cathay Pacific Airways.
Cathay Pacific na-amalite ọrụ na Ọgọst 2, 2021, ya na ụgbọ elu Boeing 777-300ER nke gbanwere maka ibu, yana atụmatụ ijere PIT ozi na njedebe afọ. Ụgbọ elu ga -abịa na Mọnde na Fraịde wee pụọ n'echi ya. Ebu ibu dị n'ụgbọ elu bụ maka ụlọ ọrụ na -ahụ maka uwe.
Ụgbọ elu ahụ ga -amalite ụgbọ elu ha site na Hanoi, Vietnam, na -akwụsị na ọdụ ụgbọ mmiri Cathay Pacific n'ọdụ ụgbọ elu mba Hong Kong tupu ọ gafee PIT. Cathay Pacific bidoro ọrụ ibu na PIT na Septemba 2020 site na ụgbọ elu 20.
Ikike PIT nwere ike ibubata ibu ngwa ngwa wee bute ya na gwongworo maka nnyefe bụ otu n'ime ihe kpatara Cathay Pacific na onye na -ebubata ibu ibu Unique Logistics ji họrọ ịlaghachi maka azụmaahịa ọhụrụ ha.
Marc Schlossberg, onye isi oche onye isi oche nke lọjistik pụrụ iche kwuru, "Ọnọdụ mpaghara ọdụ ụgbọ elu nke Pittsburgh, nkwado obodo na arụmọrụ arụmọrụ na -enye anyị ezigbo ọnọdụ iji rụọ ọrụ site na Vietnam na Cathay Pacific ruo mpaghara Pittsburgh." "A na -enye nkwekọrịta lọjistik pụrụ iche ka ọ rụọ ọrụ ihe dị ka ụdị ụgbọ elu 120 dị otú ahụ na ọtụtụ ụgbọ elu si Eshia banye PIT na ọdụ ụgbọ elu ndị ọzọ na United States ruo afọ 2021, na -agbakwunye ikike ibu ụgbọ elu bara uru maka ndị mbubata US."
Schlossberg kwukwara, "Enwere ike ịgbakwunye ụgbọ elu ndị ọzọ na PIT ka ọrụ ahụ na -abawanye."
Page 1 nke 2 Na Mbụ	Osote
Airport Boeing Cathay Pacific lọjistik Pittsburgh
Manchester United ewepụla nkwekọrịta nkwado Aeroflot
Ọgwụ ọhụrụ nke dexmethylphenidate maka ụmụaka…
Onye na-ebu ọkọlọtọ Poland laghachiri na mbara igwe India
Ọchịchị na Njikọ nke Bordeaux Wineries: Site na...
The Blossom Hotel Houston Mpụtapụta Ngwugwu Ụbọchị Ndị Nne
Mwepụ nke Ọmụmụ Ọhụrụ maka Ọgwụgwọ ALS
Ewepụtara Major Hotel Sustainability Initiative na...
Mba ndị njem nlegharị anya Rọshịa ka nwere ike ịga
SUNx Malta Mgbakọ Ndị Ntorobịa Ụwa siri ike na-eme mmemme 50...
Ahụmahụ Immersive ọhụrụ na Cincinnati
Ihe nkiri Batman na-emepe na nde $15
Ndị ọbịa Songtsam na-ahụ Peach Tibet mara mma…
Ị nwere naanị otu awa iji gbanyụọ ọkụ eletrik gị
Agbatịkwuru REAL ID Act n'ihi ọrịa na-efe efe
Nleta Venice: N'oge na-adịghị anya Ndokwa na ịkwụ ụgwọ achọrọ
Nnwale ụlọ ọgwụ kwadoro nke FDA maka ụbụrụ glioblastoma ...
Ụgbọ elu Saint John-Toronto ọhụrụ na Swoop
Ahịa wii wii ahụike ruru ijeri US $76.5 site na 2031